Mintidiin weerartay xero qaxooti oo ku taalla Niger - BBC News Somali
Mintidiin weerartay xero qaxooti oo ku taalla Niger
7 Oktoobar 2016
Image caption Mintidiin weerartay xero qaxooti oo ku taalla Niger
Mintidiin hubeysan ayaa weerar ku qaaday xero qaxooti oo ku taalla dalka Niger, ee galbeedka Afrika. Ra'iisal Wasaaraha dalkaasi, Brigi Rafini, ayaa sheegay in ugu yaraan 22 askeri oo ilaalineysay xeradaasi lagu dilay weerarkaasi.
Xerada ayaa ku taalla meel u dhow xadka uu dalkaasi la wadaago Mali, waxaana ku nool qaxooti ka yimid waqooyiga Mali. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR ayaa xaqiijisay weerarkan.
Waxay sheegtay in rag hubeysan oo wata ilaa iyo 10 gaari ay xerada soo weerareen Khamiistii ka hor inta aysan u baxsan dhinaca xadka Mali oo qiyaastii 200 km galbeedka kaga beegan xerada qaxootiga.
Dowladda Niger ayaa sheegtay in ciidammadeeda ay ku daba jiraan mintidiinta weerarka soo qaaday.
Xasilooni darro ayaa ka jirtay waqooyiga Mali afartii sano ee la soo dhaafay ka dib markii uu Faransiiska faragelin milatari ku sameeyay dalkaasi si uu meesha uga saaro mintidiin Islaami ah oo xiriir la leh Al Qaacida.